शब्द कसरी लेख्न को प्रश्न मा "बताउन" तपाईं दुवै विकल्प स्थान छ भनेर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, तर यी क्रिया विभिन्न morphological राज्य अमेरिका मा छन् भने मात्र "भन्न" र।
को क्रिया के ज्ञात छ?
सुरु गर्न, हामीलाई के बोलीको यो भाग, र के विशेषताहरु यो छ सम्झना गरौं। यो क्रिया, को महत्वपूर्ण (अलग) बोलीको भागहरु बुझाउँछ कार्य मनोवृत्ति राज्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। "के गर्न, के गर्ने?" - उहाँलाई सोधे छन् प्रश्नहरू। को क्रिया को प्रारम्भिक फारम - को infinitive भनिन्छ, र अझै पनि छ अनिश्चित फारम। यो क्रिया समय समयमा, लिङ्ग, संख्या, व्यक्ति परिवर्तन, एक मुड, आवाज छ। भन्ने (त्रुटि सहित) विभिन्न व्याख्याहरु ठीक एक विशेष मामला, "भन्छन्," र "बुनना" वा "बुनना", "splyashet" वा "splyashem" आदि "बताउन", मा लेख्न कसरी हो किन छ ...
यदि कि मुड छ ...
यो संकेत मुड (तपाईं भन्छन्) मा एक क्रिया बहुसंख्यक र दोस्रो व्यक्तिको भने, यो, पाठ्यक्रम, -ete मा समाप्त भएको छ। तर तपाईं 2nd व्यक्ति बहुसंख्यक मा एक imperative क्रिया गठन गर्ने अभिप्राय भने। एच।, त्यसपछि शब्दलाई समाप्त -ite लेख्न हुनेछ। त्यसपछि यो जोड छ: भन। तसर्थ, शब्द गल्ती छैन क्रममा "बताउन" यो निर्धारण गर्न आवश्यक छ "भन्न" र को क्रिया को झुकाव।
को क्रिया को एक व्यक्ति
तथापि, त्रुटि शायद यो संकेत मुड क्रिया छ, त्यसैले अब हामी सजिलो यो र अन्य प्रकारका मा क्रिया को हिज्जे निर्धारण बनाउँछ कि प्रभावकारी र सरल नियम हेर्न हुनेछ कल्पित गर्न सकिन्छ (जस्तै, "भन्छन्," र "भन्नु")।
यो महिलासँगविभिन्नसंयोजनहरूहुन्छन् र व्यक्तिगत अन्त बारेमा। यस 1st, 2nd वा 3rd - तिनीहरूले तीन रूसी मान्छे को व्याकरण मा अवस्थित एक व्यक्त किनभने तिनीहरूले व्यक्तिगत भनिन्छ। लागि उदाहरण, को क्रिया2एन डी एल को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। वाक्यांश मा "तपाईं के भन्न"। यहाँ तपाईं कसरी अन्त हिज्जे, conjugation बताउनुहोस्। रूसी भाषामा क्रिया त्यहाँ केवल दुई हो।
भाषाविद् आफ्नो रोमन अंक आई चित्रण क्रिया को यो समूह infinitive फारम -IT मा समाप्त छन् भनेर शब्दहरू हुन्। यो, -टी (सी गर्न) -et (हुक्म चलान) मा समाप्त क्रिया -ut (खींच) -AT (सङ्कलन), -yt (जहाजमा यात्रा गर्नु), -ot (पीसने), -yat (बीउ जमाना), र अरूलाई पनि समावेश छ। "भन्न" टोकन पनि पहिलो conjugation को शब्द को एक समूह बुझाउँछ। साथै, पहिलो श्रेणी conjugation2"राख्नु", "दाढी", -IT मा समाप्त शब्दहरू पनि समावेश छ।
अन्त म निम्नानुसार वितरण व्यक्तिगत क्रिया conjugation:
व्यक्ति Singular बहुसंख्यक
1 वाई (भन्छन्), औं (stelae) -em (भन्छन्, Stela)
2 -esh (भन्छन्, stelesh) -ete (भन्छन्, सर्छ)
3 -ex (भन्छन्, सर्छ) YM (भन्छन्) -yut (निशान)
यो सामान्यतया एक रोमन अंक द्वितीय द्वारा denoted छ। अरूलाई चोट दोष दिन,: यस वर्गमा शब्द, -IT मा समाप्त infinitive मा क्रिया समावेश छ। दोस्रो conjugation आसन्न 11-शब्द -AT वा -et मा समाप्त क्रिया को समूह तिनीहरूलाई अलग्गै। सजिलो आफ्नो राइम सम्झना गर्न को लागि:
हेर्ने राख्न, drive त हेर्न
यो सास फेर्न र सुन्न, यो घृणा,
र सहन तर अपमान,
दा र शीर्षक भर पर्छन्।
अन्त यसरी व्यक्तिगत क्रिया conjugation द्वितीय नजर:
1 वाई (सास फेर्न) -th (mol) -im (प्रार्थना सास फेर्न)
2 -ish (साँस, बिन्ती गर्नु) -ite (प्रार्थना सास फेर्न)
3 -um (breathes, प्रार्थना) -AT (सास फेर्न) -yat (बिन्ती गर्नु)
"कहो" वा "भन्न" - कसरी पत्र पाउन?
पाँच चरणमा एक सरल अल्गोरिदम त्यहाँ शङ्का जो विषयमा पत्ता लगाउन पत्र को प्रकारको शब्द मा विश्वास गर्न आवश्यक छ के मद्दत गर्छ।
कदम एक - infinitive मा क्रिया अनुवाद: भन्न।
चरण दुई - प्रत्यय चयन: -AT।
चरण तीन - बाहिर आंकडा, त्यसैले म क्रिया conjugation अन्त्य।
चरण चार - आंकडा शब्द को अपवाद बुझाउँछ कि बाहिर: यस मामला मा, छैन।
कदम पांच - म फारम (यू घन्टा, 2nd एल ...) मा रुचि छु कि तालिका फेला पार्न, टोकन -esh मा, त्यसपछि म भन्न लेख्न समाप्त हुन्छ।
हामी शब्द "चोट" भ्रममा सक्छ। तपाईं टोकन -IT मा समाप्त कि निर्णय र दोस्रो conjugation यसलाई बोक्न भने, हामी तेस्रो N को फारम लेखनमा गल्ती गर्न जोखिम चलाउन।, pl। एच। तर, यो शब्द पहिलो समूह conjugation उसलाई लागि सम्बन्धित र प्रारम्भिक फारम स्क्रीनिंग शब्द छ "चोट।"
कहिलेकाहीं हामी reflexive क्रिया सामना, त्यसपछि तपाईं विचार फिर्ती प्रत्यय-Xia छोड्न पर्छ र अन्यथा ट्रान्सक्रिप्सन अल्गोरिदम निर्धारण। "यो सजिलो Dis छ ... ll यो वर्षा पछि": उदाहरणका लागि, कसरी वाक्य मा क्रिया लेख्न? मामला तर्क हुनेछ। बहिष्कृत प्रत्यय-Xia, हामी शब्द "Disch ... टी" प्राप्त गर्नुहोस्। को infinitive हस्तान्तरण: "सास फेर्न गर्न", एक शब्द -AT मा समाप्त तर, यो बहिष्कृत शब्दहरू बीचमा छ, पहिलो conjugation गर्न, उल्लेख हुनुपर्छ, र यसैले दोस्रो conjugation हौं। सास: नियममा अनुसार, को रूप मा (... यू घन्टा 3rd एल) पत्र लेखन र अन्त हुनुपर्छ। तसर्थ, वाक्यमा reflexive क्रिया, यो लेख्न: "यो वर्षा पछि सास फेर्न सजिलो छ।"
हामी क्रिया कसरी लेख्न "भन्न" र यो एक भाषण मा संकेत मुड मा प्रयोग गरिन्छ भने र अन्य उदाहरणहरू केही dismantled "बताउन" बाहिर समझ। एक स्वर एक उच्चारण छैन जब भाषण यस भाग को टोकन हिज्जे, दुई क्रिया महिलासँगविभिन्नसंयोजनहरूहुन्छन् को नियम विषय हो।
स्पेनी दुनिया: संसारको नक्सामा स्पेनिश भाषा बोल्ने देशहरूमा
"Alchemy" - यो खेल कस्तो छ?
दुनिया मा गहिरो घाटी: नाम, विवरण, रोचक तथ्य
अलार्म Pantera - आफ्नो कार को लागि किफायती र विश्वसनीय प्रणाली
पैसा को लागि पुष्टि। संकलनको मा नियम